GOOBAHA DAGAALKA: SHANTA Meelood Ee Dagaalka Ugu Adag Ku Dhexmari Doono Man City & Real Madrid, Xiddigaha Ku Lug Yeelan Doona & Taatikada Tababareyaasha - Gool24.Net
GOOBAHA DAGAALKA: SHANTA Meelood Ee Dagaalka Ugu Adag Ku Dhexmari Doono Man City & Real Madrid, Xiddigaha Ku Lug Yeelan Doona & Taatikada Tababareyaasha
Tartanka Champions League ayaa dib usoo laabanaya caawa waxaana kulan aad loo sugayo ku ballansan Manchester City iyo Real Madrid oo markii ugu horreysay ku wada ciyaari doona garoon madhan oo aanay taageereyaal joogin, taas oo ah wax aanay hore labadan kooxood ugu soo arag tartamada Yurub.
Manchester City oo laba gool oo muhiim ahaa soo dhashatay ciyaartii hore ee Santiago Bernabeu ee bishii February ee horraantii sannadkan, waxay qaabbilaysaa kooxda afarta jeer ku guuleysatay tartanka Champions League lixdii sannadood ee ugu dambeeyey, isla markaana ah tan ugu guulaha badan dhamaan qaaradda Yurub.
Pep Guardiola iyo Zinedine Zidane ayaa waqti badan u helay inay isku daraaseeyaan, isla markaana uu mid walba ku habaysto taatikadii iyo farsamadii ciyaareed ee uu kan kale ku garaaci lahaa Jimcaha maanta. Real Madrid waxa waajib ku ah inay gool waqti hore ku dhaliso Etihad Stadium si Manchester City uu u fuulo cadaadis ah sababa inay kala daadato taatikada uu Pep Guardiola qorshaystay, isla markaana Zinedine Zidane ugu uu saamayn degdeg ah ugu yeesho ciyaarta.
Sababta Real Madrid ay ugu qasban tahay goolka waqtiga hore ayaa waxay tahay, laba gool lagaga soo dhaliyey garoonkooda, isla markaana ay Kevin de Bruyne iyo Gabriel Jesus libinta u horseedeen kooxdooda.
Real Madrid waxay haystaa ciyaartooyo ku filan inay iska dhiciyaan Manchester City guusha ciyaartana ka qaata, laakiin waxay ku xidhan tahay taatikada tababareyaasha iyo niyadda ciyaartoyda.
Tababaraha reer Catalonia ee Pep Guardiola oo lagu yaqaano dejinta qorshe kooxdiisa sabab ugu noqda inay ciyaarta maamulato, isla markaana u sahli kara inay goolal badan la timaaddo, ayaa waxa uu aqoon hore u leeyahay Real Madrid iyo ciyaartoygeeda oo uu hore ugula soo xafiiltamay waqtigii uu Barcelona tababaraha u ahaa. Zinedine Zidane ayaa sidaas oo kale ah, waxaana muddadii koobnayd ee uu shaqada tababarenimada ku jiray uu dunida tusay maskaxdiisa iyo farsamooyinka uu la iman karo ciyaarta oo socota amaba sida uu naadigiisa guulo waaweyn ugu hoggaamin karo.
Laakiin ZIZOU wuxuu ogolaan doonaa Manchester City inay ciyaarta inteeda badan gacanta ku hayso laakiin uu isaguna kaga shaqayso dhinaca goolasha.
Farsamo kasta oo ay la yimaaddaan labada tababare, waxa hirgelinteedu ku xidhan tahay ciyaartoyda ay lasoo shir-tagaan iyo sida ay markii horeba ugu soo diyaar garoobeen kulankan.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shan meelood oo dagaalka ugu weyn ku dhex mari doono labada kooxood, kuwaas oo ay ku lug yeelan doonaan toban ciyaartoy oo labada kooxoodba ah:
5. Gabriel Jesus vs Eder Militao
Gabriel Jesus waxa uu mar walba booska ka sugi jiray Sergio Aguero, laakiin maqnaanshaha laacibka reer Argentine waxa uu doorkan siinayaa Jesus boos dammaanadleh oo aanay cidina ku qabsanayn, waxaanay si foolka fool ah u loollami doonaan Eder Militao oo isaguna fursad ka helay ganaaxa Kabtan Serio Ramos.
Labadan ciyaartoy oo Brazil u wada dhashay waxa midkooda ku guuleysta dagaalka tooska ah ee ay wada gelayaan, uu saamayn ku yeelan doonaa natiijada ciyaarta iyo naadiga libinta heli doona.
Haddii Militao uu si fiican u xakameeyo Jesus, waxay taasi ka dhigan tahay inuu qabtay xiddigii khatarta ugu badan ku ahaa, halka Jesus oo jabsada Militao ay ka dhignaan doonto Real Madrid oo goolkeedu furan yahay.